Products – Page5– FinePrint
Kopila Ashram060₨
कुनै पनि आवरणका द्वन्द्व, युद्ध, क्रान्ति वा सशस्त्र आन्दोलन — सबैले राजनीतिक परिवर्तन नल्याउन सक्छन् । तर हरेक द्वन्द्वले घरहरू भत्काउँछ । कोही एक्लो हुन्छ, कसैले बा गुमाउँछ, कसैले आमा, कसैले छोरा त कसैले छोरी । जे होस्, कसैले अभीष्ट पूरा
गर्दागर्दै अर्को कसैले ‘घर’ हराउँछ । यसरी घर हराएका मानिसको नयाँ ‘घर’ कोपिला आश्रम र त्यसका सञ्चालक हरिरामजीको सफलताको कथा हो यो । कोपिला आश्रम अरु केही नभएर टुहुरा बालबालिकालाई आश्रय दिने नाममा पश्चिमा मुलुकतिर पठाउने संस्था हो । कथाको केन्द्रमा छन् हरेरामजी, जो थोरबहुत शिक्षित र खराब पृष्ठभूमिका छन् । कोपिला आश्रममा ल्याइएर विदेश पठाइएका हरेक बालबालिकाको उनी अभिलेख राख्छन्, जसबाट हामी ति बालबालिका कसरी टुहुरा भए भन्ने पूर्वकथा थाहा पाउन सक्छौं ।
गङ्गालाल ह्दय केन्द्रसँग आबद्ध रामेश कोइराला मुटु विशेषज्ञ हुन् । उनको संस्मरण ‘आमाको मुटु’ यसअघि प्रकाशित भइसकेको छ ।
Kopila Ashram by: Raamesh Koirala
जीवन जटिल मात्र छैन, सहज पनि छ । यसलाई हामीले जस्तो चाह्यौ , त्यस्तै बनाउन सक्छौ । यस्तो दृष्टिकोण राख्ने व्यक्ति हुन्— कर्ण शाक्य । शाक्यको कोष पुस्तकले मानिसलाई आनो जीवनकालमै केही गर्नुपर्छ भनेर उत्प्रेरित मात्र गर्दैन, मृत्युपछि पनि जीवन छ भन्ने बोधसमेत गराउँछ । र त्यही उत्प्रेरणाद्वारा मानिसलाई वर्तमानमा सत्कार्यतर्फ डो¥याउँछ ।
कोषमा ज्ञानको ढुकुटी मात्र छैन, लेखकका अनुभवहरुबाट निःसृत उपयोगी सूक्तिमय सुझावसमेत समेटिएका छन् । पुस्तकले हाम्रै वरपर रहेका सम्भावनालाई कार्य रुपमा उतारेर जीवनलाई सफल बनाउने ‘बुटी’को काम गर्छ ।
Kosh by: Karna Shakya
रविन्द्र भट्टराई सेयर बजार विश्लेषणका ‘पर्याय’ नै मानिन्छन् । अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण क्षमताका कारण उनी आफैंले मात्र अरुले पत्याउनै नसक्ने उपलब्धि हासिल गरेका छैनन्, थुप्रैलाई समृद्धि हासिल गर्ने मन्त्र पनि बाँडेका छन् । पुँजी बजारलाई बलियो बनाउन सचेत लगानीकर्ताको उपस्थिति अपरिहार्य देख्ने उनी तालिमकै लागि देशका धेरै जिल्ला पुगेका छन् । भट्टराईका सेयरबारे दस पुस्तक प्रकाशित छन् । व्यवस्थापन सङ्कायको वित्त तथा लगानी विषयका स्नातकोत्तर भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शङ्करदेव क्याम्पसमा १३ वर्ष लगानी व्यवस्थापन विषय अध्यापन गराएका थिए ।
Lamppost Bata Khaseko Jun by: Manu Manjil
लू नयनराज पाण्डेको पाँचौं उपन्यास हो । समकालीन नेपाली आख्यानमा पाण्डेले यथार्थबोधको नयाँ आयाम खडा गरेका छन् । उनका आख्यानकृतिमा यस युगको क्रूरता र संवेदना मर्मस्पर्शी र चित्रमय भाषामा वर्णन गरिएको हुन्छ । कथालाई सरल र सहज तरिकाले भन्न सक्नु पाण्डेको विशेषता हो । उनको आख्यान कला उलार उपन्यास र निदाएँ जगदम्बा जस्ता कथाकृतिमा उजागर भएको छ ।
यस उपन्यासमा भारतसित सीमा जोडिएको एउटा गाउँमा घटिरहने अमानवीय र आपराधिक गतिविधि, भोक र प्राकृतिक प्रकोपसित युगौंदेखि जारी सङ्घर्ष, आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थको टकराव अनि त्यसबीच हुर्किरहेको सुकोमल प्रेम र सामाजिक सद्भावलाई नजिकबाट अनुभव गर्न पाइन्छ ।
लू नेपालको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रको अभिलेख–कथा हो ।
Loo by: Nayan Raj Pandey
Ma Sakchu by: Karna Shakya
असाधारण र बहुमुखी व्यक्तित्व मदनकृष्ण श्रेष्ठको ‘रोलर कोस्टर’ जीवनको कथा हो, महको म । पुस्तकले श्रेष्ठको बाल्यकाल, प्रारम्भिक सङ्घर्ष, रुमानी प्रेम र विवाहदेखि कलाकारितामा सफल हुँदासम्मका उहापोह, श्रीमतीको क्यान्सरसँग लडाइँ र आफ्नै स्वास्थ्यसँगको पौठेजोरीसम्मको यात्रामा पाठकलाई डो¥याउँछ । पुस्तक पढ्दै गर्दा लाग्छ— दुःखका पहाड कति अग्ला, संवेदनाका खाडल कति गहिरा, हैरानीका गुजुल्टा कति जेलिएका र खुसीका रङ कति चहकिला हुन सक्छन् भनेर ।
Mahako Ma by: Madan Krishna Shrestha
Microsoft Dekhi Bahun Dada Samma by: John Wood
एउटा जेहेन्दार र प्रतिभाशाली युवाको कथा हो— मोहनदास । वर्षौं प्रयास गर्दा पनि जागिर पाउन नसकेपछि आफ्नै गाउँ फर्किएर खेती गरिरहेको मोहनदासले एक दिन थाहा पाउँछ, उसको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा उसैको नाम धारण गरेर अरु कसैले नै उसको जागिर खाइरहेको छ । त्यसपछि सुरु हुन्छ उसको लडाइँ— आफूले पाउनु पर्ने जागिर, आफ्नो नाम र प्रमाणपत्रको अधिकारको लडाइँ । यस लडाइँमा के ऊ सफल हुन्छ ?
सन् २००६ मा प्रकाशित मोहनदासका लागि उदय प्रकाशले भारतको प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । थुप्रै भाषामा अनूदित उनको यस लघुउपन्यासमाथि चलचित्र पनि बनेको छ ।
Mohandas by: Uday Prakash
सोचेजस्तै जो पाउँछु, उसैसँग जीवन बिताउँछु । यस्तै सपना पाल्थें । आखिर देखेकै सपना साकार हुन्छ, नदेखेको सपनाको आकार कहाँ हुन्छ ? र, सोच्ने गर्थें, मैले सोचेजस्तै को निस्कने हो ? कस्ती निस्कने हो ? एउटा धमिलो चित्र कोरेको थिएँ मनमा, कुनै दिन त्यो चित्रबाट वास्तविक मान्छे फुत्त निस्कियोस् र नाच्न थालोस् । नाच्न पनि को–को आएनन् मेरो मनमा ! मानौं, मेरो मन एउटा खुला स्टेज हो । मानौं, रोदीको आँगन हो । तर, कोही पाउँछन्, बिनापरिश्रम, चाहेकै कुरा । कोही देखिरहन्छन् सपना, जो कहिल्यै हुन्नन् पूरा । कसैका प्रेमकहानी फैलन्छन् कुनाकन्दरा, कसैका प्रेमकहानी रहन्छन् आधा–अधुरा । आआफ्नो भाग्यको कुरा ।
Monsoon by: Subin Bhattarai
समाज व्यवस्थाको पिँधमा रहेका
मानिसका कथा, जसले तपाईंको दिमागलाई
झङ्कृत पारिदिन्छन् ।
बाल्यकालको सुखद स्मृति र वयस्क शहरको डरलाग्दो वर्तमानका कथा ।
Nail Cutter by: Uday Prakash